The Rohingya News Bank : Audio
နစေ့ဉျ ရဒေီယိုသတငျး (အသံဖိုငျ ) မလေ၊ ၂၀၂၂
Labels: 2022, Audio, mm, မလေ, အသံဖိုင်များ
နစေ့ဉျ ရဒေီယိုသတငျး (အသံဖိုငျ ) ဧပွီလ၊ ၂၀၂၂
Labels: 2022, Audio, mm, အသံဖိုင်များ, ဧပွီလ
နစေ့ဉျ ရဒေီယိုသတငျး (အသံဖိုငျ ) ဖဖေျေါဝါရီလ၊ ၂၀၂၂
Labels: 2022, Audio, mm, အသံဖိုင်များ, ဖေဖေါ်ဝါရီလ
Labels: 2022, Audio, mm, ဇန္နဝါရီလ, အသံဖိုင်များ
နေ့စဉ် ရေဒီယိုသတင်း (အသံဖိုင် ) နိုဝဘာင်္လ၊ ၂၀၂၁
Labels: 2021, Audio, mm, နိုဝဘာင်္လ, အသံဖိုင်များ
နေ့စဉ် ရေဒီယိုသတင်း (အသံဖိုင် ) စက်တင်္ဘာလ၊ ၂၀၂၁
Labels: 2021, Audio, mm, စက်တင်္ဘာလ, အသံဖိုင်များ
Rohingya Broadcast \_ t ရိုဟင်ဂျာ“ Lifeline” ရေဒီယို - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ကြာသပတေးနေ့၊ ၂၀၁၀ MC & News: Sami Ahmed & Mohammed ဟူစိန် \_ arsenic \_ netexchange $ \_ Bangla \_ MP3 ROH Lifeline 07012021 1130 UTC Intro Today: ကြာသပတေးနေ့၊ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၂၁ ၇:၃၀ am (Washington, DC, USA)
Labels: 2021, Audio, mm, News, Rohingya Lifeline
Labels: 2021, Article, ASEAN, Audio, Catastrophe, en, Myanmar, UN Warns, Video, Violence
A message from Myanmar
The Watson Institute for International & Public Affairs
Trending Globally: Politics & Policy · A Message from Myanmar
In February,acolleague at the Watson Institute forwarded the team at Trending Globally an email fromaformer student. The subject line read: “I write to you in desperation and with my life at risk.”
The email was sent from Yangon, the capital of Myanmar. The man who sent it was not exaggerating.
Labels: 2021, Audio, en, Military Coup, Myanmar, Protesters
Labels: 2021, Audio, Civil War, en, Myanmar, U.N. Official, Warns